लगानीकर्ताका लागि ‘सालको पात टपरी हुने, हे बरै नहुने सल्लैको’ जस्तै भयो वर्ष २०७५ - Aarthiknews
सोमबार, १३ माघ २०७६ Monday, 27 January, 2020
#ठूला बैंकको भरोसा
लगानीकर्ताका लागि ‘सालको पात टपरी हुने, हे बरै नहुने सल्लैको’ जस्तै भयो वर्ष २०७५
मंगलबार, २६ चैत्र २०७५
काठमाडौं, चैत २६ । वर्ष २०७५ शेयरमा लगानी गर्नेका लागि शुभ रहेन । कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीले गाएको दोहोरी गीत ‘सालको पात टपरी हुने, हे बरै नहुने सल्लैको’ जस्तै भएको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए उच्च प्रतिफल पाउन सकिने सम्भावना रहेको तर शेयरमा लगानी गर्नेले प्रतिफल प्राप्त नहुने (टपरी नहुने सल्लाको पात जस्तै) मा लगानी गरेजस्तो भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा आएर शेयर बजार उकालो लाग्ने संकेत देखिएकाले आगामी वर्ष २०७६ साल शुभ रहने संकेत देखिएको छ ।
यो वर्ष लगानीकर्ताले शेयर धितोमा राखेर लिने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले बढाएकाले शुभ रहन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउँदा एक वर्षमा शेयर बजार मापक नेप्से ८८.४७ बिन्दुले घटेको छ । २०७५ सालको शुरुदेखि नै शेयर बजार ओरालो लागेका कारण लगानीकर्ताका लागि यो वर्ष निराशाजनक हुन पुग्यो ।
शेयरको मूल्य घट्दा लगानीकर्ताले यो वर्ष ठूलो घाटा बेहोरेका छन् । यो वर्ष २०७५ को शुरुको कारोबारको वैशाख २ गते नेप्से १२८०.१५ बिन्दुमा थियो । त्यो निरन्तर घटेर अहिले अर्थात चैत २५ गते सोमबारसम्म ११९१.६८ बिन्दुमा आइपुगेको छ ।
बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लागेपछि लगानीकर्ता यो वर्ष निराश हुन पुगेका हुन् । चारैतिर निराशा छाएका कारण शेयरमा लगानी गर्नेले यो वर्ष कमाउन सकेनन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सकारात्मक सोचको विकास तथा स्थिर सरकार स्थापना हुँदाहुँदै पनि यो वर्ष २०७५ नेपालको पुँजी बजारको लागि निराशाजनक रहेको बताए ।
‘समग्रमा लगानीकर्ताले यो वर्ष गुमाए । यो वर्ष लगानीकर्ताले बैंकको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म तिर्न बाध्य भए,’ उनले भने–‘ऋण लिएर लगानी गरेका लगानीकर्ताले कमाउन सकेनन् गुमाउन मात्र पुगे ।’ शेयर बजारमा लगानीको हिसाबले यो वर्ष शुभ रहेन । पुँजी बजारमा लगानी गर्नेले दुःखका साथ यो वर्षलाई बिदाइ गदैछन् ।
नयाँ २०७६ साल कमाइको वर्ष बनोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । लगानीकर्ताले एक अर्कालाई नयाँ वर्ष कमाइको वर्ष होस् भन्ने शुभकामना दिँदै हिँड्न थालेका छन् । २०७६ सबै लगानीकर्ताको लागि सुखद् रहोस् भन्ने शुभ–कामना पनि अध्यक्ष रौनियारले दिए । यो वर्ष २०७५ को अन्तिमतिर उकालो लागेकाले पनि आगामी आवको लागि शुभसंकेत देखिएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
यो वर्ष लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावले शेयर बजारको कारोबार समेतलाई प्रभाव पा¥यो । उच्च दरको ब्याज तिरेर पनि लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएनन् । यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्नु पर्यो ।
सरकारले सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम नल्याएकाले यो वर्ष शेयर बजार ओरालो लागेको लगानीकर्ताले बताउँछन् । २०७५ सालमा नेप्से मात्र होइन कारोबार रकममा समेत कमी आयो । दोस्रो बजारमा डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको शेयर कारोबार हुँदै आएकोमा यो वर्ष दैनिक औसत २५ करोडमा ओर्लिन पुग्यो । तर, वर्षको अन्तिमतिर भने नेप्सेसँगै कारोबार रकममा समेत बृद्धि भएको छ ।
शेयर धितो राखेर लिएको कर्जाको ब्याज बढेका कारण शेयर बजार ओरालो लागेको एक विश्लेषकले बताए । ‘शेयर बजार निरन्तर घट्नुको प्रमुख कारण नै ब्याजदरमा भएको भारी वृद्धिलाई मानिएको छ,’ उनले भने । बैंकमा लगानी गर्न आवश्यक रकम (तरलता) को कमी हुँदा ब्याज बढ्ने गर्छ । ब्याजदर र शेयर बजार एक अर्कासँग सम्बन्धित हुने गरेको विश्लेषक बताउँछन् । ब्याजदर बढ्दा शेयरको मूल्य घट्छ, ब्याजदर घट्दा बढ्छ ।
ब्याजदर बढेकाले शेयर बजारमा गिरावट आएको धेरै लगानीकर्ताको भनाइ छ । यसअघि ब्याजदर कम थियो । त्यतिबेला शेयरको भाउ पनि बढेको थियो । ब्याजदर बढेसँगै शेयर मूल्यमा शिथिलता आउन पुग्यो । वर्षको अन्तिममा पुँजी बजारमा सरकारले बोनस र हकप्रद शेयरको आधार मूल्यमै लाभकर लिने जस्ता कारणले सिर्जित अन्योलले पनि बजार घटाउन मद्दत पुग्यो । यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।
त्यसै गरी शेयर कारोबार गर्न अनिवार्य प्यान चाहिने व्यवस्था गर्न लागिएकोमा लगानीकर्ताको दबाबमा सानो कारोबार गर्नेलाई ऐच्छिक र ठूलो कारोबार गर्नेलाई मात्र नयाँ वर्षदेखि प्यानमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो वर्ष लगानीकर्ताले पुँजी बजारको सुधारको माग राखेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बारम्बार भेट गरे । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्न पुगेका थिए । त्यो समितिले शेयर बजार सुधारसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना र होटलको नियामक निकायको गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत रुपमा केही सकारात्मक काम गर्दै आएकाले पनि शेयर बजार आगामी दिनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष आइतबारबाट शुरु हुँदैछ । २०७५ मा सुखद सन्देश दिन नसकेको शेयर बजारले नयाँ वर्षमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह नगर्ने हो कि भन्ने आंशका लगानीकर्तामा छ । मुलुकको एकमात्र पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन उपत्यका बाहिरबाट कारोबार शुरु गरिएको छ । ब्रोकरहरुले मुख्य शहरमा शाखा खोल्दै गएका छन् । बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन पनि लगानीकर्ताले दबाब दिएका छन् ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए रिडरोडभित्र खुम्चिएको शेयर बजार मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने र बजारको दायरा फराकिले हुने बताइन् । त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा उनको छ । शेयर बजार बढ्का लागि अर्थतन्त्रका सूचकमै सुधार हुनुपर्ने भनाइ कतिपयको छ । ‘बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ, ब्याजदर बढेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘यसले गर्दा पनि बजार बढ्न नसकेको हो ।’
शेयर बजारमा विदेशी लगानी खोल्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । ‘विदेशी लगानीकर्तालाई शेयर बजार खुला गर्नुपर्छ र एनआरएनलाई कार्डकै आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्छ,’ एक बिज्ञले भने–‘नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’ अनलाइन कारोबार शुरु गरिएको छ । यसले शेयर बजार सुधारमा मद्दत पुग्ने कतिपयको बुझाइ छ । लगानीकर्ताले बैंकको ब्याजदरमा कमी आएमा र विदेशीलाई पनि यसमा लगानी गर्ने वातावरण बने मात्र शेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
नेप्समा भारी गिरावट, सबै सूचक ओरालो लागे
यसकारण झुम्मिए लगानीकर्ता एनआइसी एशिया बैंकको शेयर किन्न
एक सातामा साढे आठ अर्बको कारोबार
सनराइज बैंकसँग गाभिन लागेको फाइनान्सको साधारणसभा शनिवार
हिमालयन बैंक र डिप्रोक्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आइतवार
भारतीय बिमा कम्पनी डुब्दै, यसरी बढ्दैछ नेपालमा त्रास
नक्कली भ्याट बिल बनाएर १४ करोड ८७ लाख ठगी
एक्काइस तोला सुनसहित युवक पक्राउ
दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार : चिनियाँ टोली नेपालको तयारी कुर्दै
अपराध बढेको कि करागार साना भएका, क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी
यसरी रिहा भए मनाङे, भन्छन् एन्फाको भ्रष्टाचार बल्ल खुल्दै छ
सप्तकोसीमा जेटबोट अब १० घण्टाको बाटो चार घण्टामा
निजीक्षेत्रलाई कसेर कर उठाउने पक्षमा छैनौ : अर्थमन्त्री
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
यसरी गुम्दैछ सरकारप्रति ठूला बैंकको भरोसा
एक रुपैयाँ कप चिया, पाँच रुपैयाँमा पेटभरी भात
निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको ढाडसः ढुक्क हुनुहोस्, डण्डा हान्दैँनौँ
को हुन् नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा ?
भारतको असममा एकलाख नेपालीभाषी नागरिकताविहीन हुँदै, के नेपाल बोल्नु पर्दैन ?
सापकोटालाई सभामुख बन्ने बाटो खुल्यो, उनीविरुद्धको रिट न्यायाधीश फुयाँलले हेर्न नमिल्ने